ICloud क्यालेन्डर मार्फत प्राप्त गर्ने स्पाम कसरी हटाउने म म्याकबाट हुँ
कसरी iCloud पात्रो मार्फत स्पाम हटाउने
हालका दिनमा, स्प्यामरले एक नयाँ संचार च्यानल फेला पार्‍यो: हाम्रो आईक्लाउड क्यालेन्डरमा क्यालेन्डर कार्यक्रमहरूमा आमन्त्रित। यो स्पाम हाम्रो कम्प्युटरहरू वा आईक्लाउड खाताहरूको लागि खतरा होइन, तर यो कष्टप्रद छ र एकै साथ यसलाई मेटाउने तरिका यति सहज छैन, जस्तो कि यो ईमेल हो।
"रे-बान", "ओक्ले", "लुइस भिट्टन" वा चिनियाँ स्टोरहरु: को स्टोरहरु लाई आमन्त्रितहरु को लागी प्रयोगकर्ताहरु को गुनासो छ। सिद्धान्तमा एप्पल आईडीको साथ कुनै पनि प्रयोगकर्ता, यदि तपाईं यसलाई आफ्नो उपकरणहरूमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं यस प्रकारको अनावश्यक जानकारीको लागि "शिकार" हुन सक्नुहुन्छ।
हामीसँग हाम्रो अधिकार छ स्प्यामबाट बच्न धेरै तरिकाहरू हाम्रो आईक्लाउड क्यालेन्डरहरूमा, निश्चित समाधान छैन, तर हाम्रो क्यालेन्डर व्यवस्थापन सुधार गर्नुहोस् जब सम्म एप्पलले उपायहरू राख्दैन:
पहिलो विकल्प: ईमेलमा सूचनाहरू स्थानान्तरण गर्नुहोस्:
यो अन्तिम होईन, तर कष्टप्रद सूचनाहरूबाट टाढा रहनुहोस्। यसको विपरीत, यदि हामीले क्यालेन्डर सूचनाहरू प्राप्त गर्‍यौं भने तिनीहरू फेरि प्राप्त हुनेछैनन् न त। यसलाई सक्रिय गर्न:
आईक्लाउड वेबसाइट पहुँच गर्नुहोस्, www.icloud.com र तपाइँको आईडी प्रविष्ट गर्नुहोस्।
पात्रो पहुँच गर्नुहोस्।
तल दायाँपट्टि गियरमा क्लिक गर्नुहोस्।
"उन्नत" ट्याबमा जानुहोस्। तल तपाईं "निमन्त्रणा" सेक्सन देख्नुहुनेछ र बक्सलाई "ईमेल द्वारा पठाउनुहोस् ठेगाना@email.com" मा सेक गर्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस् र यो नै हो!
दोस्रो विकल्प: सूचनाहरूलाई "रद्दी" क्यालेन्डरमा सार्नुहोस् र मेटाउनुहोस्।
यो विकल्प गाह्रो छ, किनकि तपाईले प्रत्येक पटक एउटा सूचना प्राप्त गर्नु पर्‍यो भने, तर तपाईं निम्तो अस्वीकार गर्नुहुन्न र त्यसैले स्प्यामर तिनीहरूलाई पठाउँदा थकित हुनेछ किनभने उहाँ सोच्नुहुन्छ कि ठेगाना सक्रिय छैन। तपाईंले निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ।
अनुप्रयोग खोल्नुहोस् क्यालेन्डरहरू.
एउटा नयाँ क्यालेन्डर सिर्जना गर्नुहोस्, नामको साथ यसलाई पहिचान गर्दछ, जस्तै Sh रद्दीटोकरी क्यालेन्डर ».
निम्ताहरू सार्नुहोस् घटनाको तपाईं यस क्यालेन्डरमा चाहनुहुन्न।
क्यालेन्डर मेटाउनुहोस् र पप-अप विन्डोमा यसले संकेत गर्दछ "मेट्नुहोस् र सूचित नगर्नुहोस्"।
चरण २ देखि Rep लाई दोहोर्याउनुहोस् प्रत्येक पटक तपाईं एक स्पाम आमन्त्रित प्राप्त।
तेस्रो विकल्प: पात्रोमा निमन्त्रणा अस्वीकार गर्नुहोस्।
जब हामी एक आमन्त्रित प्राप्त गर्दछौं, हामी भन्न सक्छौं: स्वीकार्नुहोस्, हुन सक्छ, वा स्वीकार्न सक्नुहुन्न। सबै भन्दा साधारण विकल्प हो स्वीकार्दैन। यस तरिकाले तपाईंले अरू केहि गर्नुपर्दैन, तर तपाईं स्प्याम जेनरेटरलाई भन्छ कि खाता सक्रिय छ र तपाईं आफ्नो लदान बढाउन सक्नुहुन्छ।
यो सत्य हो कि यी आमन्त्रणको प्रासंगिकता कमसेकम यस क्षणको लागि अपेक्षाकृत कम छ। तर एप्पलले यसलाई सकेसम्म चाँडो अंकुरमा हुत्त्याउनु पर्छ। अहिले सम्मको महत्व हो न्यु योर्क टाइम्स o CNBC तिनीहरू समाचार प्रतिध्वनिित छन्। तसर्थ, यो गम्भीर मुद्दा होईन, पक्कै एप्पल अध्ययन गर्दैछ यी लिपिहरू कसरी रोक्न सकिन्छ, सायद हाम्रो पहिचान बिना नै, ईमेल फिल्टरहरू जस्तो क्यालेन्डर फिल्टरहरू सहित।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » कसरी iCloud पात्रो मार्फत स्पाम हटाउने
यो सप्पलको लागि सूचनालाई ब्लक गर्न विकल्प सक्षम पार्ने जत्तिकै सजिलो छ, जुन हाल अवस्थित छैन। यदि तपाईंले निमन्त्रणा अस्वीकार गर्नुभयो भने, तपाईं जारीकर्तालाई संकेत गर्नुहुन्छ कि खाता अवस्थित छ र प्राप्त स्पामको संख्या बढ्दछ।
हामी उनीहरूले एप्पलमा कति समय लिन्छौं हेर्नेछौं किनकि तिनीहरू धेरै सक्रिय छैनन्।
साइबर सोमबार प्रस्ताव छ कि तपाईं याद गर्न सक्नुहुन्न
VLC ले तपाईंलाई videos 360० भिडियोहरू प्ले गर्न अनुमति दिनेछ धन्यवाद, तपाईं अब बीटा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ